Brian Hook in Asia Society
“Waxay u muuqataa in taliska uu dilay kun qof oo shacab Iiraaniyiin ah, tan iyo markii dibad-baxyada ay billowdeen,” waxaa sidaas yiri wakiilka gaarka ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda Mareykanka u qaabilsan Iran, Brian Hook.
Hook ayaa sheegay in Wasaaradda Arrimaha Dibedda ay heshay 32,000 oo muuqaallo ah, oo ay ku jiraan sawirro laga qaaday Koonfurta Iran, halkaasi oo ciidamada Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah la tuhmayo inay ku ceyrsadeen koox dibad-baxayaal ah, ayna ku fureen rasaas, ayaga oo dilay qiyaastii 100 qof.
Hook ayaa sheegay in ciidamada Iran ay sidoo kale dhaawaceen “dhowr kun”, ayna xireen uygu yaraan 7,000 oo qof.
Hook ayaa qiray inay adag tahay in la xaqiijiyo tirada rasmiga ah ee dhimashada, hase yeeshii waxa uu yiri “waxaan ognahay inay yihiin boqolaal qof.”
Cilmi-baaraha hay’adda xuquuqda aadanaha Amnesty International ee Iran Mansoureh Mills ayaa sheegtay inaysan waxba ka oran karin dhimashada kunka qof, ayna ku ekaanayaan qiyaastii ugu dambeysay Amnesty oo ah 208 qof.